Amapaki wamanzi amahle kakhulu e-USA | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | América, Ukuzilibazisa
Uma kunokuthile okuphawula i-United States ngezikhathi zokushisa, kungamapaki ezingqikimba zayo, inamanani amaningi futhi asezingeni elihle kakhulu, kepha kuba sengathi lokho bekunganele, inamapaki ezingqikimba avakashelwa kakhulu emhlabeni. La mapaki amanzi ase-USA angavakashelwa ngaso sonke isikhathi sonyaka ngoba banezinsizakalo ezikhethekile ukugwema ukubanda.
Kepha lapho ukushisa kushaya, akukho okungcono futhi okuqabula njengokubhukuda echibini. Yize ukugeza kuyichibi kuyaqabula ngempela, ezikhathini eziningi abantu bafuna imizwa. Uma usohambweni oluya e-United States futhi ufuna ukushaya ukushisa futhi ube nesikhathi esimnandi, lapho-ke awukwazi ukuphuthelwa lolu hlu lwamapaki wamanzi amahle e-USA. Uzoba nesikhathi esimnandi futhi futhi ujabulele sengathi uyingane futhi. Njengokungathi lokho bekunganele, amapaki wamanzi anikela ngezindawo ezikhangayo ezimisa inhliziyo futhi anikeza nobumnandi bomndeni. Kusukela kuma-roller roller coasters kuya kumasilayidi wamanzi, awukwazi ukuphuthelwa amanye amakhona alo.
Umkhumbi kaNowa noma UNowa Ark
Leli paki lamanzi liseWisconsin Dells futhi liyipaki lamanzi elikhulu kunawo wonke esizweni, libizwa ngokuthi uMphongolo kaNowa ngenxa yalesi sizathu futhi liphila ngokuvumelana negama lalo elinenani elikhulu lokuheha amanzi okususa umoya wakho lapho nje ungena ngomnyango. I-akhawunti engenalutho ngaphansi kuka- Amaslayidi angama-51, amachibi amabili okuvunguza kanye ne-surf simulator.
Ibuye inikeze imisebenzi yawo wonke umndeni, kepha uma ungumuntu othanda ukuthakazelisa ungaya emidlalweni yayo eyedlulele, kufaka phakathi umsila wofezela othumela izivakashi phansi kwesilayidi esicishe sibheke phezulu ku-loop ethambekele. Ungahamba futhi ngeBlack Anaconda, efana ne-roller roller coaster futhi ejabulisa kakhulu eMelika.
Sengathi lokho bekunganele futhi unezindawo zokudlela ezinhle zokuvuselela amabhethri akho nokukwazi ukudla ukudla kwasendaweni okufana ne-curd yoshizi noma ukuthola amasoso alo amnandi futhi angenakuphikiswa. Ngaphandle kokungabaza, leli paki lamanzi lingenye yezinconywa kakhulu ukuvakashelwa.
Leli paki lamanzi liseKansas City futhi uzomangala ngamaslayidi alo aphezulu. Unesodwa esibizwa nge-Verruckt, okuyisilayidi esiphakeme kunazo zonke emhlabeni futhi esizokuphefumula ngaphambi kokuthi wehle kuso. Ibuye ibe namaslayidi amaningana lapho izivakashi zayo zingagxuma khona kanyekanye zifinyelela ngesivinini esikhulu.
Kepha uma ungekho ezindaweni eziphakeme ngokweqile futhi ukhetha ukuhlala olwandle, leli paki lamanzi likunikeza nemifula emnandi yokuhamba ukuze uthokozele amanzi. Ungawajabulela futhi amagagasi kube sengathi usolwandle olunolaka futhi uze wehlele phansi emhosheni noma ujabulele ipaki enkulu.
Ngaphezu kwalokho, uma lokho bekunganele, ungabheka ibha echibini ukuze ube nethuba lokuphumula emanzini alo afudumele ngenkathi ujabulela isiphuzo ukukusiza ukuthi uvuselele amabhethri akho ngaphambi kokuqhubeka nokuzidela kwakho kuleli paki lamanzi.
Umhlaba wamanzi o Water Umhlaba
Le paki yamanzi itholakala eDenver, ine-close to Ukuheha amanzi okungu-40 noSuku Lwamanzi Lomhlaba kwenza iphathi enkulu ukukhumbula ukubaluleka kwamanzi. I-Mile High Flyer iyindawo enhle kakhulu yokugudluza amanzi futhi ingenye yezindawo eziheha izinkanyezi ngaleli jubane nokuqina kwayo.
Isiphepho siyindlela eyingqayizivele yokuhamba ngesihlenga lapho abashayeli bezindiza behla khona ithubhu emnyama lapho kuvunguza khona isiphepho esikhulu. Izivakashi zivame ukukuthanda kakhulu ngoba ukuduma okukhulu, ukukhanya, imvula kuyaphindwa futhi konke lokhu kwenza izivakashi zizizwe zididekile futhi zididekile.
Uma unesifiso sejubane, lapho-ke ngeke ukwazi ukugwema ukudlula kwiTurbo Racer okuzofanele uyithole lapho ungena epaki lamanzi bese uqala ukuthola konke ekuqukethe.
White Water Ipaki ungayithola ku- Branson, . Leli paki lamanzi lincane kunamanye amapaki alezi zici njengalezo ezibalulwe ngenhla, kepha ngeke likushiye ungenandaba nakho konke elikunikezayo. Amanzi ayo amhlophe akhokhela usayizi wawo futhi futhi anezindawo ezikhangayo ezihlelwe kahle kakhulu, futhi into enhle kakhulu ... ukuthi inemisebenzi yomndeni wonke, kanye nabancane.
Ine-slide okuthiwa KaPau lokho ukwehla okunokwehla kwama-degree angama-70 futhi nge-twist ezothatha ama-hiccups akho. Kepha futhi zinokuheha kwayo yonke iminyaka, ngakho-ke ungathokozela, ngokwesibonelo, iSplashaway Cay enamagiza nabadubuli bamanzi abazokusiza ukuthi uthokozele amakhona ayo ngamunye. Kepha kunokuthile okuvame ukubiza izivakashi kakhulu ukuthi ziye kuleli paki lamanzi esikhundleni sokuya kwelinye elihlukile, leso yisheduli. Phakathi nezinyanga zikaJulayi no-Agasti, ipaki lamanzi lokuzijabulisa livulwa kuze kube yishumi ebusuku kusukela ngoLwesine kuya ngoMgqibelo.
Water Izwe lase-USA
Leli paki lokuzijabulisa liseWilliamsburg, eVirginia futhi lingenye yamapaki wetimu amahle kakhulu ongawathola namuhla. Izokuvumela ukuthi uthokozele isipiliyoni sokungabi nasisindo kokunye okukukhangayo njengemijaho yesihlenga eyehla egqumeni ukuze ubuyele ngokushesha odongeni olukhulu olwehlayo oluzokuthatha umoya. Ungahamba futhi nabangane abathathu ku I-Aquazoid eyenzelwe abanesibindi.
Ipaki yokuzijabulisa yenzelwe isibindi kakhulu futhi ungajabulela ama-roller coasters aso wamanzi. Impela, yipaki elihle labantu abathanda ukujabulela amanzi kanye nelanga. Ngakho-ke ungajabulela futhi uphumule ngokuzungezile okukukhangayo, ukuzidela kwayo nemisebenzi ekupha yona. Ungathokozela futhi ube yingxenye yemibukiso ebukhoma eyenziwa ngezikhathi ezahlukahlukene, ezilungele izingane.
Manje awunazaba, unohlu olukhulu lokuthi ukhethe ipaki yamanzi evumelana nobuntu bakho noma izintshisekelo zomndeni wakho, ukuyithokozela ngendlela enkulu!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Amapaki amanzi amahle kakhulu e-USA
U-Andy Warhol noLouise Bourgeois eGuggenheim Museum